Apple dia afaka mahazo headphone avo lenta amin'ity taona ity | Avy amin'ny mac aho
Apple dia afaka mamoaka headphones avo lenta amin'ity taona ity
Araka ny notaterin'ny mpandalina ara-bola KGI Ming-Chi Kuo, Apple dia afaka mamoaka headphones avo lenta amin'ity taona ity, manararaotra ny fisarihana ananany amin'ny AirPods sy HomePod.
Ny vaovao dia avy amin'ny tatitra iray ho an'ireo mpampiasa vola Apps, izay nahazoan'ilay mpandalina lalana fidirana. Apple dia hamoaka headphones avo lenta, miaraka amina endrika vaovao, izay hanampy amin'ny lisitra lava misy ny kojakoja am-peo. Hatramin'izao, tsy misy pitsopitsony fantatra, toy ny datin'ny fampisehoana vokatra, na dia mety aseho amin'ny telovolana farany amin'ny 2018 aza izy io.
Azo vinavinaina fa manana an-telefaona ireto fifandraisana tsy misy tariby. KGI Ming-Chi Kuo, miresaka momba ny «headphones» miaraka amin'ny filozofia AirPods, fa miaraka amin'ny toetra akustika nohatsaraina. Azo vinavinaina fa ny endrika dia zavatra mitovy amin'ny efa henon'ny headphones Beats. Mbola ho hita eo fa hanana mpanampy i Siri.
Ny tatitra dia milaza fa "vaovao" ny headphone Ho hita eo raha misokatra na mihidy ireo «écouteur» be loatra ireto.. Azo vinavinaina ary miaraka amin'ny fikasana hampiavaka azy ireo amin'ny AirPods, hakatona ireo headphone vaovao ireo, satria ny akustika dia tsara kokoa amin'ity karazana headphone ity, noho ny fanafoanana ny tabataba sy toerana malalaka kokoa hampidirana fitaovana tsara kokoa.
Ampahany manan-danja iray hafa koa ny fahalalana ny fitaovan'ny finday vaovao. AirPods, ohatra, androany dia manana puce W1 hanampy amin'ny pairing sy ny Siri miasa.. Mifanohitra amin'izany kosa, ny HomePod, izay lehibe kokoa, dia manana SoC A8 matanjaka, afaka mampifanaraka ny akustika ao amin'ny efitrano sy ny fikirakirana ireo mikrô namboarina.
Amin'ny lafiny iray hafa, azo antoka fa ho hitantsika ny kinova faharoa an'ny AirPods. Raha ny tokony ho izy dia tsy misy zava-baovao andrasana avy amin'ny AirPods, na dia azo vinavinaina aza raha hanana processeur nohatsaraina. Misy resaka ampidiro ny Hey Siri. Talohan'izay dia tokony ho hitantsika ny famandrihana tsy misy tariby, mifanome tanana miaraka amin'ny tranga manokana, izay naseho tamin'ny teny ifotony tamin'ny septambra 2017, saingy mbola tsy fantatsika ny datin'ny fandefasana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Apple dia afaka mamoaka headphones avo lenta amin'ity taona ity
Noterena hanome ny governemanta sinoa i Apple ary manome azy ny teny miafin'ny mpampiasa azy
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny tabilao amin'ny Mac